Akụkọ - Achara decking nlekọta - ihicha na ndozi ndozi
Strand kpara achara Decking D Series
Achara Decking DF021
Achara Decking DF121
Achara Decking DF321
Achara Decking DF621
Strand kpara achara Decking M Series
Achara Decking MF021
Achara Decking MF121
Achara Decking MF321
Achara Decking MF621
Achara decking elekọta – ihicha na ndozi Atụmatụ
Achara bụ ụdị ahịhịa siri ike nke dị mma maka ime mbara ụlọ na mbadamba osisi. Achara achara na-eme ka ogige gị bụrụ ọdịdị dị mma ma mara mma. Heavylọ achara achara n'èzí na-eji ihe achara kacha mma, ma na-esite na teknụzụ nhazi strick. Ala achara dị arọ anaghị egbu egbu, na-enweghị isi, kwụ chịm ma kwụsie ike, na-eguzogide ọgwụ ụmụ ahụhụ. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ebe dị n'èzí, dị ka ogige, obodo, ebe, wdg.
Agbanyeghị, ụlọ achara dị n'èzí nwere ike ịdị ọcha ma na-acha ntụ n'isi oge. Cleandị ọcha na mmezi kwesịrị ekwesị dị mkpa iji mee ka oche ahụ maa mma dị ka o kwere mee.
1. Gịnị mere o ji dị mkpa ịrụzi ihe ndị mebiri emebi?
Enwere ọtụtụ ihe ga - emetụta mbadamba osisi, dịka epupụta, pollen, ntu oyi, mmiri ozuzo ma ọ bụ ọtụtụ anwụ. Ọnọdụ ihu igwe dị iche iche na ebe dị iche iche nwere ọtụtụ mmetụta na ọdịdị nke bọọdụ achara. N'ọnọdụ ndị dị otú a, bọọdụ ndozi ahụ ga-eru unyi, na-agbachapụ agba ya ma nwee ike mgbawa ma gbawaa agbawa. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa ịme ndozi ụfọdụ ka oche gị dị mma.
2. Kedu otu esi eme mmezi?
Boardlọ osisi achara, dị ka ebe osisi siri ike na-ekpo ọkụ, ọ dị mkpa iji dozie ya na mmanụ mmiri (dịka Woca mmanụ) opekata mpe otu afọ. REBO na-atụ aro na ị ga-arụ ọrụ mmezi dị ọcha ma dịkwa mfe ozugbo echichi nke bọọdụ decking, maka ụfọdụ ncha ga-eme n'oge nrụnye ahụ.
Lee ụfọdụ ndụmọdụ maka ntụnyere:
Nke mbụ, ị ga-ahọrọ ụfọdụ ngwaọrụ kwesịrị ekwesị iji kpochaa mbadamba.
1) Hichaa mbadamba ihe: sachaa ya na mmiri ma ọ bụ jiri nhicha pụrụ iche tufuo mucedine na unyi wee hichaa ya na ahịhịa.
2) Gbaa mbọ hụ na bọọdụ ndozi ahụ ga-akpọ nkụ ma tinye mmanụ n'èzí na mmiri.
3) Chebe ebe a na-echekwa ruo mgbe mmanụ ga-akpọnwụ.
Nke a bụ agba dị iche iche nke REBO M-usoro (ọkara carbonized) na D-usoro (carbon miri emi)
Idozi ahihia nke osisi achara n'èzí nwere ike ijigide mmetuta nke odori ala, odighi isi ike. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ oche gị anya dị ka mara mma dị ka na mbụ, mmezi dị ezigbo mkpa. Ọ bụ ọrụ dị mfe maka gị, nri? Maka ozi ndị ọzọ, biko chere na ị ga-akpọtụrụ anyị.
Adreesị: Mba 175, National Rd 319, Nanjing High-tech Mpaghara, Zhangzhou, Fujian